Sheekada Weelearn: Muuqaalka-Baro
Posted by Tranquillus | Jul 11, 2018 | Tababarka internetka
Weelearn waa barnaamij kumbuyuutar ah oo loogu talagalay kumbuyuutarrada dhammaan mawduucyada la xidhiidha koritaanka shakhsiyeed, fayoqabka, cilmi nafsiga iyo waxbarashada.
Abuurista bogga Weelearn
2010, Ludovic Chartouni waxay bilawday buugaag ku saabsan mawduuca fulinta. Wuxuu ku sharaxay horumarka shakhsiyeed, wuxuu udub dhexaad u yahay buug gaar ah "Nolol faraxsan: cilmi nafsiga farxad" by Christophe André.
Isla mar ahaantaana, aragtida kor u qaadista warbaahinta shabakadda ee internetka, wuxuu go'aansaday inuu isku darsado hodanka iyo qaab dhismeedka buugga iyada oo saameynta fiidiyowga. Tani waa sida uu u abuuro Paris (XVe iyada oo lagu dhajinayo mareegta Weelearn oo leh laba caqabadood: sida loo bilaabo suuqa ganacsiga shakhsi ahaaneed? Iyo sida loo qanco qorayaasha ugu fiican si ay u sameeyaan fiidiyoowga tababbarka?
Afar sanno ka dib, Ludovic Chartouni ayaa ku faraxsan inuu ku guuleystay tartankiisii, isagoo ku tiriya Boris Cyrulnik ama Jacques Salomé oo ka mid ah shakhsiyaadka ka wada shaqeynaya mashruuciisa.
Ujeeddadeeda kaliya: si loo hagaajiyo nolol maalmeedka macaamiisheeda!
Si loo jebiyo qaybta horumarinta shakhsi ahaaneed, waa inaad heshaa fikrad cusub, sababtoo ah waxaa jira meelo badan oo maareynaya mawduucaan. Si aad u noqotid mid guul leh, waa inaad heshaa xagal asalka ah ee weerar. Tani waa sida fikradda loo keenay in lagu daro hodantinnimada buugga iyo saameynta fiidiyaha.
Suuqa bilaashka ah ee tababarka internetka iyo waxbarashooyinka dhammaan noocyada, waxay ahayd lagama maarmaan in la helo hab lagu codsanayo macaamiisha mustaqbalka. Qaaciddada la doortay ee la doortay ayaa ah inay bixiso fiidiyow walba tababarka ee dhinacyada isboortiga, horumarka shakhsi ahaaneed iyo cilmi nafsiga oo leh saddex waji ah:
Baro qoraallada ugu fiican ee ay ku shaqeeyaan,
Waxaad bixisaa fiidiyowyo habaysan oo tayo leh
dharbaaxo fiidiyowyada, gunooyinka iyo buugaagta la socda.
Waa kuwee Tababareyaasha Weelearn ee loogu tala galay?
Qof walba! Qofkasta oo raba inuu sii wanaajiyo nolol maalmeedkana dareemo fiicnaan!
Fiidiyoowga tababarka ee Weelearn wuxuu noqon karaa mid xiiso u leh qof kasta, da 'walba iyo dhammaan qaybaha nolosha. Mawduucyada badan ee la daaweeyo, waxaa muhiim ah in qof waliba iyo qof kasta.
Fiidiyowyada waxaa loogu talagalay habkan oo loo heli karo qof walba. Haddii ay yihiin khabiiro - mid kasta oo ka mid ah beertiisa - kuwaas oo soo farageliya, waxaa looga baahan yahay inay sii wadaan luuqada la fahmi karo ee aan la fahmin. Jargo gaar ah ayaa dabcan la mamnuucay.
READ Raac MOOC oo ku yaala Openclassroom si aad si dhaqso ah u kordhiso CV-gaaga
Fiidiyowyada tababarka ee Weelearn ayaa sidoo kale loogu talagalay shirkadaha laga yaabo inay rabaan inay tababaraan shaqaalahooda kooxo yaryar ama ka weyn. Shirkado badan oo intaa ka badan ayaa u yimid inay fahmaan in horumarka shakhsi ahaaneed, fayo-qabka ama cilmi-nafsigu aanu ahayn mowduucyo ka hor istaagaya albaabkooda, laakiin waxay yihiin arrimo saameynaya iyaga si dhow. Shaqaale farxad leh waa shaqaale wax soo saar badan. Shirkadaha qaarkood waxay doortaan inay tababbaraan shaqaalahooda si ay uga caawiyaan inay ka gudbaan dhibaatooyinkooda kala duwan, qaar ka mid ah kuwaa oo si toos ah ula xiriira dareenka shirkadda.
Daneeyayaashu waa dhammaan khabiirada ku sugan beertooda waxaana lagu aqoonsanayaa asxaabtooda. Waxay khibrad u leeyihiin duubista fiidiyowga maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa inay dadweynaha ku hadlaan oo ay la hadlaan joornaalada. Waxay yaqaanaan sida loo sameynaayo si ay u hoggaamiyaan dhagaystayaashooda, haddii la doorto, waa aqoontooda, tayadooda, laakiin sidoo kale awooddooda inay ku faafiyaan mawduucooda.
Doorashada qorayaasha waxay leedahay wax badan oo la sameeyo guusha Weelearn. Its founder, Ludovic Chartouni, ayaa si wacan uga warqabta, waxana uu si joogta ah u raadiyaa dadka ku hadla afkooda, kuwaas oo magacooda iyo tinigaba ay ku dhigi doonaan tababbarro fiidiyooga si guul leh.
Maxay tahay sheekada fiidiyowga tababarka Weelearn?
Fiidiyowyadu waxay bixiyaan hab ku salaysan aragtida mawduucyada ay daboolayaan. Waxay ku qoran yihiin cutubka waxayna gooyaan gaaban gaaban si ay u noqoto mid si cad oo sahlan loo isticmaalo. Tababbar kasta, Weelearn wuxuu isticmaalaa khubaro iyo aqoonyahanno la aqoonsan yahay.
Soo bandhigida fiidiyowyada waa mid firfircoon si kor loogu qaado xiisaha iyo in la ilaaliyo dareenkiisa. Codadka, garaafyada iyo qoraalka ayaa isku dhafan si ay u helaan natiijo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh. Filimadu waxay isku daraan saameynta sawirrada iyo dhismaha buugga. Cinjirrada qoraalka ku jira ee fiidiyoowga ah waxay si joogto ah u xusuustaan ​​qodobbada lagama maarmaanka ah ee qoraaga.
Fiidiyow kasta waxaa ku jira gunno leh su'aalo, qalab muuqaal ah ... si loo kordhiyo waxbarashada.
Mawduucyada tababarka ee Weelearn
Goobtu waa wax aad u fiican oo aad si fudud u aragto. Marka lagu daro matoorka raadinta, waxaad leedahay haraagaaga tusmada liiska hoos ku qoran oo ku siinaya qaybaha tababarka, sida:
Waxbarashada iyo qoyska,
Nolosha iyo habdhaqanka,
Lammaane iyo galmo,
Caafimaadka iyo fayoqabka.
READ Smartnskilled: goobta tababarka khadka tooska ah ee kulmaan dhammaan baahiyaha
Markaad tagto mawduuc kasta, waxaad ka heli kartaa koorsooyinka kala duwan ee la xiriira.
Marka aad riixdid tabarka fiidiyowga aad xiiseyneyso, waxaad heleysaa faahfaahinta ku saabsan tababarka:
Ereyga ku saabsan qoraaga,
Fiidiyowga laga soo qaaday filimka,
Soo koobidda cinwaanka module kasta,
Fikradaha dadka horay u daawaday tababarka,
Tilmaame kuu ah inuu kuu sheego haddii tababarka uu soo bandhigo buug yar, buundooyin, quusyo ...
Tani waxay ku siinaysaa fikrad aad u cad oo ah waxa aad iibsaneyso.
Waxaad ka heli doontaa bogga tababbarka ee adiga oo xiiseynaya xulashada fiidiyo kale oo la xidhiidha kuwaas oo laga yaabo inaad xiiso u qabato.
Fiidiyowga fiidiyoowga ah ee banaanka ka baxsan
Sababtoo ah Ujeedada Weelearn waa in la gaaro dhagaystayaasha ugu wayn ee suurtogalka ah, fiidiyowyadu waxay ku jiraan boggaga lamaanayaashooda iyo kooxda Groupon waxay kor u qaadeysaa tababarkeeda aduunka oo dhan ee Faransiiska ku hadla.
Intaas waxaa sii dheer, barnaamijka telefishinka waxaa loo hubiyaa on channel Free iyo Orange.
Shirkadaha waaweyn ee naadiyada ah waxay soo iibsadeen koorasyada tababarka Weelearn ee qaarkood, oo ay ku jiraan Bouygues Telecom iyo Orange, si loogu magacaabo oo kaliya kuwa ugu caansan.
Weelearn.com waxay bixisaa liis ay ku qoran yihiin in ka badan boqol boqol oo foomka ah, oo ah horumarin joogto ah. 19,90 €, waxaad ka iibsataa mid ka mid ah fiidiyowyada kuwaas oo ka dambeeyay 1h ilaa 2h30. Marka la helo, waxay si dhakhso ah u heli karaan kumbuyuutarka (Mac ama PC), kiniin iyo casriga ah.
Si kastaba ha ahaatee suurtagal ma ahan in la soo dejiyo iyaga oo aan lahayn taageero digital ah, CD ama fure USB ayaa la siin doonaa.
Weelearn waxay kuu soo bandhigeysaa laba qorshe oo aan rasmi ahayn. Waxaad heli kartaa koorsooyinka oo dhan, idinkoo ogsoon in ay kordhiso bil kasta. Dib-u-cusboonayntu waa mid toos ah, laakiin wax-soo-saarka ayaa ah mid aan khasab ahayn, oo leh hal guji waxaad dooran kartaa inaad tirtirto rukunkaaga.
Diiwaanka aan xadidneyn ee hal bil ayaa ku dhigma 14,90 € iyo sanadka oo dhan, 9,90 € bishii. Waxaad dooran kartaa fiidiyahaaga ugu horeysa si aad u tijaabiso adeeggan, laakiin haddii aad qaadato liki, tan labaad, bilawga bil kasta waa mid aad u xiiso badan.
READ Koorsooyinka Lacagaha Ah Iyo Dhammaan Mawduucyada
Waa maxay mustaqbalka Weelearn?
Dhegaystayaasha Weelearn waxay si joogto ah u korayaan. Isticmaalayaasha ayaa marka hore soo jiidanaya mawduuc gaar ah oo daneynaya oo ka welwelsan. Fursad ay ku soo rogeen qaaciddada, waxay doortaan qaabab kale oo ay u noqdaan kuwo daacad u ah barxadda.
Taasi waa sababta aanu Weelearn u raadineyno horumarinta mawduucyo badan oo cusub oo kordhiya liiska tababarka.
Iyo haddii aad noqoto qoraaga Weelearn?
Tani waa waxa ay meheradu bixiso! Markasta fiiro gaar ah oo ku saabsan waxyaabaha cusub ee xiisaha leh iyo kobcinta, Weelearn mar walba waa u furan tahay soo jeedin kasta.
Haddii aad tahay macalin, takhtar cilmi nafsi, qoraa ama khibrad khaas ah, waxaad la xiriiri kartaa wiishka Weelearn oo mar walba raadinaya inay la kulmaan dadka ay u badan tahay in ay dhamaystiraan liistadiisa tababarka.
Dabcan, waa inaad ka soo baxdaa shuruudaha qaarkood. Waa inaad leedahay xirfado xoog leh iyo waaya-aragnimo hodan ah oo ku saabsan hal ama wax ka badan oo la xiriira caafimaadka, fayo-qabka, horumarinta shakhsiyeed, xirfad-yaqaan, cilmi-nafsi ama waxbarasho. Waa inaad bartaa mawduuca oo aad ka noqotid khabiir la aqoonsan yahay.
Dhammaan shaqadaada dheeraadka ah waxay ku qanacsan tahay. Waxaa laga yaabaa inaad ku baraneysid dadweynaha, dhagaystayaasha xirfadlayaasha ah ama qayb ka mid ah dhexgalka ganacsiga. Waxaa laga yaabaa in lagu daabacay guryo culus oo la aqoonsan yahay.
Waa inaad awood u yeelatid inaad diyaariso tababbar habaysan oo la heli karo oo dhan. Waa inaad taqaanaa sida loola tacaalo dadka dhagaystayaasha ah ee aan aqoonin mawduucaaga oo aad ku xayeysiiso ereyadaada. Weelearn waa fiiro xaqiiqda ah in qaababkiisa uu yahay mid xiiso u leh qof walba, iyada oo aan loo kala saarin.
Dhamaan walxaha miisaanka culus ee CV-gaaga ayaa kuu oggolaan doona inaad ka qaybgasho tartanka Weelearn. Dabcan, waa inaad si fiican u raaxaysataa hadalada kamarad iyo soo wajahda daawadayaasha.
Taasi waa, waxaad taqaanaa wax walba oo ku saabsan Weelearn waxaadna tagi kartaa goobtooda si ay u eegaan liistadooda iyo daawashada fiidiyowyada si ay kuu siiyaan aragti qoto dheer oo ah waxa ay diyaaradu u fidiso.
Sheekada Weelearn: Muuqaalka-Baro July 14th, 2018Tranquillus
horeTalooyin lagu furayo xisaab bangi oo Faransiis ah
socdaAdeegyada ugu fiican ee internetka loogu diro faylasha waaweyn oo aan diiwaangelin.
Tuto.com: Koorsooyinka Waxbarashada Bulshada Si Loo Tababaro Xirfadaha Shaqada.
Samee Iftiinkaaga Shaqo Lagu Tilmaamo Tilmaamaha Fiidiyoowga Elephorm
Soo bandhigida barnaamijka tababarka internetka iBellule
Maxicours: tixraaca bixinta umeerinta internetka raqiis ah